Ma ogtahay in markabkii xannibay Hilinka SUWAYS uu weli u xiran yahay Masar (Heshiis hadda dhacay & goorta sii daynta) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Ma ogtahay in markabkii xannibay Hilinka SUWAYS uu weli u xiran yahay...
Ma ogtahay in markabkii xannibay Hilinka SUWAYS uu weli u xiran yahay Masar (Heshiis hadda dhacay & goorta sii daynta)
(Qaahira) 05 Luulyo 2021 – Markabkii konteenar qaadka ahaa ee isku qataarey Hilinka muhimka ah ee Suways ee Ever Given oo ay Masar qabsatay isla markaana haysatey ilaa Maarso ayaa ugu dambayn lasii dayn karaa Arbacada soo aaddan.
Wakaaladda Hilinka Suwayd ayaa sheegtay in munaasabad sii dayn ah loo qaban doono markabkan 7-da Luulyo, si loo saxiixo heshiis ay Masar la gaartey milkiilayaasha markabka loona sii daayo.
Masar ayaa markabka qabsatay si ay magdhow uga hesho sharikadda Japanese-ka ah ee isla leh ee Shoei Kisen Kaisha maadaama ay dakhli aad u badan waydey mudadii uu marinku – oo xiriiriya Yurub, Afrika iyo Aasiya – xayirnaa markabkan dartii.
Markabkan oo xamaali kara 200,000-ton ee MV Ever Given ayaa si dhex-roor ah ugu qataarmey hilinka oo aad u dhuuban kaddib markii ay jihada ka weecisey duufaan dhacaysey 23-kii Maarso, isagoo halkaa ku xirnaa muddo 6 maalmood ah.
Masar ayaa mudadaa lumisay dakhli dhamaa $12 ilaa $15 milyan oo doollar, sida ay sheegayso Wakaaladda Kannaalka, gaar ahaan Agaasimaha Guud ee Osama Rabie oo sheegay in Masar ay milkiilayaasha markabka kula heshiisey inaysan shaacin lacagta magdhowda ah ee lagu heshiiyey.
Masar ayaa bilowgii doonaysey $900 milyan oo magdhow ah, waloow ay markii dambe kusoo koobtay $550 milyan oo doollar.
Previous articleDAAWO: Tuulo Somalia ku taalla oo qof ”diyo qofeed” laga qaado haddii uu geed jaro
Next articleSucuudiga iyo Imaaraadka oo ay ka tafatay (Arrinta ay isku qabteen & arrimo badan oo ay horay iskugu hayeen)